Gabar Soomaaliyeed oo 26sano kadib isu bedeshay Rag (NIN) oo caawin loo dalbayo. (VIDEO) - iftineducation.com
Gabar Soomaaliyeed oo 26sano kadib isu bedeshay Rag (NIN) oo caawin loo dalbayo. (VIDEO)
iftineducation.com – Gabar Soomaali ah oo Xaalada haweennimo ku jirtey mudo ayaa la shaaciyey in ay isu bedeshay nin, sida aad ku arki doonto Muuqaalka video-ga eek u lifaaqan warbixintani oo ay ka muuqaneyso.
Gabadhan la sheegay in mudo 26-sano ay Haween (naag) ahayd,inkastoo wararku ay sheegayaan in ay ahayd labeeb (oo ah qof isku ah Lab iyo Dhedig), hase yeeshee Hadda lagu arkey Gar iyo xubinta taranka ee Ragga.
Magaca Gabadhani ayaa lagu sheegay Ayaan, waa 26-sano jir ku nool deegaanka Dhagaxley ee dalka Kenya.
Muuqaalka hoose ayaa lagu dalbadey in gacan laga geysto Xaaalada Caafimaad ee Gabadhani oo weli aan loogu yeerin magac rageed.
Soo saarinta Gawaarida is wada oo Mareykanka ka Bilaabmeysa
Cesc Fabregas ficiladii Anshax darro ee uu ku kacay oo Dunida ay la yaaban tahay.